ROUTER ကိုအပေါ် UPNP ကို ​​ENABLE လုပ်နည်း - ROUTER က - 2019
အဓိက Router က
Router ကိုအပေါ် UPnP ကို ​​Enable
သငျသညျအသုံးပြုသူများအနေ router ကိုသုံးလျှင်တစ်ခါတစ်ရံတွင် torrent ဖိုင်တွေ, အွန်လိုင်းဂိမ်းများ, ICQ နှင့်အခြားလူကြိုက်များအရင်းအမြစ်များကိုရယူသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ UPnP (Universal Plug and Play ကို) ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပါသည် - တိုက်ရိုက်နှင့်လျင်မြန်စွာရှာဖွေရေးများအတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်နှင့်အလိုအလျောက် LAN ပေါ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကို configure ။ တကယ်တော့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုသင့် router ပေါ်တွင်လက်စွဲစာအုပ် port forwarding ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သာ router ကိုပေါ်နှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် UPnP function ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုနေသလဲ?
Router ကိုအပေါ် UPnP Turn
သင်သည်သင်၏ router ကိုပေါ်အမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများအတွက်ဖို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ဆိပ်ကမ်းများစခေငျြဘူးဆိုရငျ, သင် UPnP အတွက်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဒီနည်းပညာအားသာချက် (အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း, မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာလဲလှယ်) နှင့်အားနည်းချက်များကို (လုံခြုံရေးကွာဟချက်) နှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။ UPnP ၏ပါဝင်မှုဖို့ချဉ်းကပ်မှုတမင်တကာနှင့်သတိရှိရှိ။
သင့် router ပေါ်တွင် UPnP function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နိုင်ရန်အတွက်, သင်က web interface ကိုရိုက်ထည့်ရပါမည်နှင့် Router ကစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပြောင်းလဲမှုများစေ။ ကလွယ်ကူပြီးကွန်ရက်ပစ္စည်းကိရိယာများမဆိုပိုင်ရှင်၏အတော်လေးနိုင်စွမ်းလုပ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုသကဲ့သို့, TP-Link ကို router ကိုအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးစဉ်းစားပါ။ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ် algorithm ကိုထံမှ routers ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်။
မည်သည့် web browser ကိုမှာလိပ်စာဘားထဲမှာ router ကို၏ IP-address ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အများအားဖြင့်ကကိရိယာ၏နောက်ဘက်အခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးတံဆိပ်ပေါ်တွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အများဆုံးမကြာခဏလိပ်စာများကိုအသုံးပြု192.168.0.1နှင့်192.168.1.1ထိုအခါတံခါးသော့ကိုနှိပ် ဝင်ရောက်.
သင့်လျော်သောလယ်ကွင်းတရားဝင်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်အတွက်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအမျိုးအစားအတွက် Web Interface ကိုဝင်ရောက်ဖို့။ စက်ရုံ configuration ကိုခုနှစ်တွင်ဤတန်ဖိုးများကိုတူညီနေသောခေါင်းစဉ်:admin ရဲ့။ ထိုအခါ button ကို click « OK ကို».
သင့် router ရဲ့ Web Interface ၏အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြီးတာနဲ့အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ခံရ "အဆင့်မြင့် Settings" ကိုအဘယ်မှာရှိကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ် parameters တွေကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Router ကို၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိုးချဲ့ settings အခန်းရှာကြသည် "NAT »ထပ်ဆင့်ပို့ နှင့် Router ကအတွက် configuration မှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်ပါကသို့သွားပါ။
ပေါ့ပ်အပ်ဆပ်မီနူးကိုတစ်ဦးသိပ်လိုအပ်နေသော option ကို၏နာမတော်ကိုမြင်လျှင်။ ကျနော်တို့လိုင်းပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ « UPnP ».
box ကိုအတွက် slider ကိုရွှေ့ « UPnP » ညာဘက်နှင့် Router ကပေါ်ဒီ feature လှည့်။ Done! လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သည့်အချိန်တွင်မဆို, သင်သည်သင်၏ router ကိုအပေါ် UPnP function ကိုကို turn off မှလက်ဝဲရန် slider ကိုဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် UPnP ကို ​​Enable
Router ကိုအတွက် configuration နဲ့အတူကျနော်တို့ထွက်နေသေးတယ်နှင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် LAN ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ PC မှာ UPnP ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအမြင်အာရုံဥပမာအားဖြင့်, ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် Windows 8 ကိုအတူ PC ကိုယူပါ။ အသုံးအများဆုံး operating system ကိုတခြားမူကွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းသိမ်းရေးအသေးစားကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်။
မောက်စ်ခလုတ်ကို right-click "Start" နှင့်ဆက်စပ် menu ကနေ, ကော်လံကို select "Control Panel ထဲက"အဘယ်မှာရှိနှင့်ရွေ့လျားနေကြသည်။
နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပိတ်ဆို့ဖို့ go "ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်"ဘယ်ကျွန်တော်တို့ကို setting ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။
စာမျက်နှာပေါ်တွင် "ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်" စာရင်းအပေါ် LMB ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Control Center ကိုကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်း Center က".
လာမယ့် window ထဲမှာကျနော်တို့လိုင်းပေါ်တွင်နှိပ် "အဆင့်မြင့်ခွဲဝေမှု setting များကိုပြောင်းလဲပါ"။ ကျနော်တို့နီးပါးပန်းတိုင်ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။
လက်ရှိပရိုဖိုင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကွန်ယက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ automatic tuning ကွန်ယက်ကို devices များပါဝင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်လျော်သောနယ်ပယ်များတွင်တစ်ဦးကို tick ထားတော်မူ၏။ အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ "Save Changes"သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အသုံးပြုမှု UPnP နည်းပညာလေးရယ်မှ Restart ချလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တဦးတည်းအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အာရုံစိုက်။ ထိုကဲ့သို့သော uTorrent အဖြစ်အချို့သောပရိုဂရမ်များတွင်လည်း UPnP ကိုအသုံးပြုရန် configure လုပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်ရလဒ်ကောင်းကောင်းသင့်ရဲ့အားထုတ်မှုကိုအပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဘို့အသွား! ကံကောင်းပါစေ!
ကိုလည်းကြည့်ပါ: တစ် Router က TP-Link ကိုအပေါ်ဖွင့်လှစ်ဆိပ်ကမ်းများ
https://termotools.com my.termotools.com © Router က 2019